Related taxa: * Brachygalba goeringi
Ireto sary manaraka ireto dia sary nalaina tamin'ny alalan'ny serivisy fikarohana API Flickr . Raha te hampiditra sary ho ampiasaina eto amin'ity pejy ity ianao dia afaka mandefa azy ireo amin'ny flickr. Soraty azafady fa marihina amin'ny fikaroham-bahoaka izy ireo, miaraka amin'ny anarana latinina ho toy ny iray amin'ny sary tags. Raha mahita sary diso ianao, dia azonao atao ny manadihady azy ireo amin'ny alàlan'ny fanindriana ny kianja kely eo ambanin'ny sary. Hanazava sary maromaro no alaina alohan'ny hanaisotra azy ireo.
Avibase no notsidihina 285,880,979 nanomboka tamin'ny 24 jiona 2003. © Denis Lepage | Politika fiarovana fiainan'olona